Toti Martínez de Lezea: «अनुभवहरू र जीवनको हेर्ने तरिका ट्रान्सफर योग्य छैन» | वर्तमान साहित्य
Toti Martínez de Lezea: «अनुभवहरू र जीवनको हेर्ने तरिका ट्रान्सफर योग्य छैन»
फोटोग्राफी: Toti Martínez de Lezea को फेसबुक प्रोफाइल।
तोटि मार्टिनेज डे लेजी एक लामो र धेरै छ मान्यता प्राप्त जस्तै प्रक्षेप ऐतिहासिक उपन्यास लेखक। त्यहाँ धेरै शीर्षकहरू छन् सान्चोको धरहरा, जडिबुटी विशेषज्ञ र सबै चुप लागे, स्वास्थ्य, अन्डा, इताहिसा, भाँचिएको चेन वा दूध र महको भूमि।। अक्टूबरमा हाम्रो नयाँ पर्खिरहेको छ।
यस अन्तर्वार्तामा उसले हामीलाई उसको बारेमा थोरै बताउँछ libros, लेखकहरू y पात्रहरू मनपर्नेहरू, सोच्नुका साथै नयाँ विमोचन र हामीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ हामीलाई भन्नुहोस् सम्पादकीय दृश्य वर्तमान म तपाईंको महान दयालुता र समर्पित समयको ठूलो कदर गर्छु.
TOTI MARTÍNEZ DE LEZEA का साथ साक्षात्कार
टाटि मार्टिनेज डे लीजा: मैले पढेको पहिलो पुस्तकलाई जति सम्झना गरिरहेछ ... केही समय भयो! म तपाईंलाई भन्न सक्दछु कि टेलिभिजन सेट मेरो घरमा प्रवेश भयो जब म १ years बर्षको थिएँ र मेरा आमा बुबा दुबै राम्रा पाठक हुनुहुन्थ्यो र म पुस्तकहरूको बीचमा हुर्कें। मलाई यो पनि थाहा छ कि मेरो पहिलो पढाइ यो थियो एन्डरसन कथाहरू, भाइहरूको ती Grimm, लास बास्क महापुरुष डॉन द्वारा संकलित जोसे मिगुएल डे बारान्डीरन २० औं शताब्दीको सुरूमा।
पहिलो कथाको लागि मैले लेखेको थिएँ ... म उच्च विद्यालयमा लेख्नमा राम्रो थिएँ! म थियो टेलिभिजन लिपि लेखक, म दुई समूह भेला थिएटर र पनि लेख्यो म लिपिहरू, तर हामी भन्न को लागी मेरो लेखनमा पहिलो थियो नमीठो, जबकि प्रकाशित गर्न पहिलो थियो यहूदी क्वार्टर को सडक एन 1998।
TML: उत्तर कम वा कम उस्तै हो, मलाई याद छैन, यद्यपि मलाई याद आउँछ जस्तो काम गर्दछ मोन्टे क्रिस्टोको गणना, डुमासको, २००० पानीमुनि यात्राको लीगहरू, Jule Verne द्वारा, वा खजाना टापुस्टिभनसनद्वारा, जुन म सानो छँदा पढेको थिएँ। ती पठनहरूले मलाई थप र हाल चाहिएकोमा डोर्‍यायो हाम्रो पुस्तकालय परिवार को बारे मा हुन्छ 15.000 पुस्तकहरू.
किन तिनीहरूले मलाई चकित पारे? किनभने तिनीहरूले मलाई इतिहास र यात्रामा शुरू गरे, अज्ञात संस्कृतिहरूमा, जीवन शैली, साहसिक, परम्पराहरु... र म जारी!
TML: मसँग छैन कुनै हैन y मसँग छ धेरै। मेरो प्रत्येक समयको यसको लेखकहरू छन्, प्रत्येक क्षणमा मलाई के मनलाग्दो छ त्यसमा निर्भर रहन्छ। यदि मैले केहि उल्लेख गर्नुपर्‍यो भने, मलाई थाहा छैन ... भिक्टर ह्युगो, डुमास, टोलस्टो, डोस्तोइभस्की, जोला... म एकदम उन्नीसवीं सताब्दी हुँ!
TML: हे, हे, कस्तो प्रश्न! भेट्नुहोस् जीन भल्ज्यानको नायक दयनीय, oa एडमण्ड डन्टा de मोन्टे क्रिस्टोको गणना. सिर्जनाको रूपमा पहिले नै सिर्जना गरिएको कुनै पनि चरित्रमा, कुनैलाई राम्रो छैन। प्रत्येक लेखकको आफ्नो संसार हुन्छ, र यसको नायक कल्पनाशक्ति का काम हो; अनुभवहरू र जीवनको हेर्ने तरिका ट्रान्सफरेबल हुँदैन.
TML: म एक सिगरेट बत्तीको लागि प्रयोग गर्थें, जो सामान्यतया एस्ट्रेमा जलेको थियो। अब मैले धूम्रपान त्यागेको छु, तर म के गर्छु संगीत बजाउनुहोस्। दुबै जब मैले लेख्छु र पढ्छु खोज्छु एउटा आवाज मलाई साथ दिन, मलाई कुनै तरिकामा मद्दत गर्न मैले पढेको वा लेख्ने कुरालाई पुन: निर्माण गर्नुहोस्.
TML: मसँग काम गर्न कोठा छ। पढ्नुहोस् म यो कहिँ पनि गर्छुभान्साकोठामा पनि म मकरोनी पकाउन कुर्दै! सामान्यतया म खाए पछि लेख्छु र बेलुकाको खाना सम्म। कहिलेकाँही म बिहानको हप्ता सम्म सम्म जान्छु, छ देखि आठ घण्टा बीच दैनिक
TML: मलाई लाग्छ केहि। जब तपाईं एक व्यावसायिक पाठक हुनुहुन्छ, जब तपाईं धेरै लेखक, शैली, प्लट, फारम, शब्दकोश, सबै प्रभावहरु द्वारा असंख्य पुस्तकहरू पढ्नुहुन्छ, अवचेतनमा रहन्छ, विशेष गरी जब यो लेखनको कुरा आउँछ। मसँग लेखक वा खास काम छैन, तर यो सत्य हो म १ th औं शताब्दीका साहित्यहरू बारे उत्साहित छु, त्यसैले सम्भवतः प्रभाव त्यहाँबाट आउँदछ।
TML: जो कोही मलाई रोचक कुरा छ। म केही खास परिस्थिति, समय वा यसको पछाडि घटनाको आलोचनात्मक दृश्य बिना पढ्न पढ्नमा रुचि राख्दिन। उदाहरण को लागी, राम्रोसँग लेख्नुको अतिरिक्त, एउटा अपराध वा नाटक उपन्यास, त्यसैले प्रचलित मा अहिले, तपाईंले मलाई एक भन्दा बढी हत्याहरू भन्नु पर्छ वा त्यो केहि यौन सम्बन्धको विवरण हो। हुनु पर्छ एक पृष्ठभूमि, एक आलोचना वा एक निर्णय सम्बन्धित तथ्य र पात्रहरूको, अन्यथा मैले रुचि गुमाउँछु र यसलाई समाप्त गर्दिन।
TML: मैले भर्खर शीर्षकको एउटा सुन्दर पुस्तक सकें एक नर्कमा अनन्तता, इरेन भालेजो द्वारा। यो एक हो परीक्षण के को बारेमा पुरानो संसारमा किताबहरुको आविष्कार, यो कसरी लेखिएको हो र यसको हिसाबले एक वास्तविक आनन्द। यो आविष्कार भएको छ। र मैले भर्खर शुरू गरें मोंगो व्हाइट, को कार्लोस Bardem, १ th औं शताब्दीमा दासत्वको बारेमा कडा कहानी र ऐतिहासिक उपन्यासहरूका लागि स्पार्टको पुरस्कारको उपन्यास।
लेख्न को लागी, मैले यो पहिले नै तपाईंलाई बताइसकेको छु मैले यस बर्षको उपन्यास समाप्त गरे फेब्रुअरीमा। भित्र आउनेछ अक्टोबर वा त्यहाँ। शीर्षक: सम्पादकीय, र यो ऐतिहासिक छैन, वा हुनसक्छ?
TML: खराब नराम्रो… यो सँधै भएको छ, तर अब यो अधिक यस्तै अवस्थाको कारण र नयाँ प्रविधिहरू: इन्टरनेट, नेटवर्कहरू, प्लेटफर्महरू ... अर्को तर्फ, त्यहाँ धेरै पाठकहरू छन् कि जति प्रकाशित छन्र त्यहाँ अर्को कुरा पनि छ: कुनै पनि कामको लागि ज्ञान र अनुभवको आवश्यक पर्दछ, तर यसले जान्छ कि हामी five बर्षसँग लेख्न सिक्छौं। शब्दहरू सँगै राख्नु भनेको किताब कसरी लेख्ने भनेर जान्दैन, चर्को स्वरले गाउनु भनेको एक ओपेरा गायक हो भन्ने होइन। लेखक हुनुपर्ने तीन शर्तहरू छन्: धेरै पढेको छ, समय खर्च गर्छौं र, विशेष गरी, भन्नु पर्ने केहि छ, यस्तो लागी सजिलो छैन जस्तो देखिन्छ।
TML: वास्तवमा, यो मलाई धेरै खर्च छैन। हामी एउटा सहरमा बस्छौं, हामीसँग तरकारी बगैचा छ, हामी बाहिर जानु हुँदैन, र हाम्रो समय संगीत र पुस्तकहरू बीच पार हुन्छ। यद्यपि यो सत्य हो म अल्छि छु अस्पष्ट मैले यी चार महिनामा एउटा रेखा लेखेको छैन किनकि हुनसक्छ यो वर्षको उपन्यास समाप्त भइसकेको छ, त्यसैले म हतारमा छुइन। मलाई लाग्दैन कि म यी कुनै पनि अवस्था राख्छु, हेरफेर र नियन्त्रण को बाहेक जसमा सामान्य नागरिकहरूलाई अधीनमा राखिएको छ, जहिले पनि हामी भुक्तानी गर्छौं र यसको परिणाम दिन्छौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साक्षात्कार » Toti Martínez de Lezea: «अनुभवहरू र जीवनको हेर्ने तरिका ट्रान्सफर योग्य छैन»